प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको वित्तीय विवरण सार्वजनिक, अवस्था कस्तो ? – Insurance Khabar
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको वित्तीय विवरण सार्वजनिक, अवस्था कस्तो ?
प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०७६, बिहीबार १४:०१
काठमाडौं । निर्जिवन बीमा कम्पनी प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएको छ । सो बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वित्तिय विवरण सार्वजनिक गर्दै लेखापरिक्षण अघिको मुनाफा १३ करोड १७ लाख २५ हजार रुपैयाँ भएको जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १५ करोड ८६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ मुनाफा कमाएको कम्पनीको समीक्षा अवधीमा मुनाफामा गिरावट आएको छ ।
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले एक अर्ब ११ करोड ४० लाख १० हजार रुपैयाँ खुद आम्दानी गरेको छ । सो अवधीमा खुद बीमा शुल्क आम्दानी ४६ करोड ११ लाख १८ हजार गरेको छ । अघिल्लो वर्ष एक अर्ब १३ करोड ५९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको कम्पनीले समीक्षा अवधीमा झण्डै दुई करोड रुपैयाँ खुद आम्दानीमै गिरावट आउँदा मुनाफा खुम्चिएको हो ।
कम्पनीले समीक्षा अवधीमा एक लाख २६ हजार २६८ वटा बीमालेख जारी गरी एक अर्ब २४ करोड ७५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ कूल बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो वर्ष एक लाख ३३ हजार १६१ वटा बीमा पोलिसी बिक्रीमार्फत एब अर्ब ३७ करोड १६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ कूल बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो ।
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले अझै ५१ करोड ८९ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बीमा दावी भुक्तानी बाँकी छ । अघिल्लो वर्ष ७० करोड ९६ लाख २२ हजार रुपैयाँ दावी भुक्तानी बाँकी थियो ।
कम्पनीले प्रतिशेयर आम्दानी २० रुपैयाँ ५३ पैसा रहेको छ । त्यस्तै कम्पनीको नेट वर्थ २०८ रुपैयाँ १० पैसा रहेको छ भने प्रतिशेयर कूल सम्पत्ति ३८० रुपैयाँ रहेको छ ।